General Indhocadde oo ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo dilkii General Galaal - Awdinle Online
Gen. Yuusuf Maxamed Siyaad (Indha-cadde), oo wareysi siiyay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho, ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyay dilkii Gen. Maxamed Nuur Galaal, oo lagu dilay weerarkii Hotel Afrika.
Gen. Indha-cadde ayaa sheegay in uu tuhun weyn ka qabo, in Al-shabaab aysan dilin marxuum Galaal, balse ay si bareer ah u dileen Ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya ee hawlgalka ka waday gudaha Hoteelka.
Wuxu tilmaamay in qaabka loo dilay marxuum Galaal, uu tuhun iyo shaki badan gelinayo cidda dilkiisa fulisay, islamarkaana uu ku baaqayo in baaritaan dhammaystiran lagu sameeyo xaqiiqada ku saabsan dilkiisa.
Sidoo kale, wuxu codsaday in baaritaanka ay si wadajir ah u sameeyaan Qoyskiisa, dad lagu kalsoonyahay iyo dowladda Federaalka, si baaritaankaas u noqdo mid dhammaystiran.
Previous articleCiidamo ka tirsan kuwa Wasiir Janan oo dowladda oo isku dhiibay+ Sawirro
Next articleShirka Dhuusamaeeb oo furmay iyo dhamaan Madaxda oo ku wada sugan